World of Viruses Computer - Khabiirka Cirka
Kombiyuutar kasta oo leh xiriirka internetka wuxuu la kulmi karaa noocyo khatar ah. Mid ka mid ah hanjabaadaha koowaad waa fayraska kombiyuutarka. Ma aha khalad in la yiraahdo fayraska kombiyuutarka ayaa noqday dhacdo caadi ah maalmahan, u oggolaanaya in qawaaniinta si ay u weeraraan qalabkaaga oo ay xadaan macluumaadkaaga shakhsiyeed
Kaadi-gacmeedyo kala duwan ayaa loo sameeyay si ay dhibaatooyin u keenaan internetka - storing high moisture grain. Laakiin waxaad ka takhalusi kartaa iyaga oo raadinaya caawimaad khabiir kumbuyuutar ah iyo iyadoo la ogaado nooca dhibaatada. Sidee loo sameeyaa kombiyuutarkaaga bilaashka ah? Waa su'aal inta badan la waydiiyo, laakiin khubarada ayaa ku fashilmay inay bixiyaan jawaabo sax ah.
Marka uu jiro bii'ada software-yada la soo bandhigo, waxay noqoneysaa mid khasab ah in aan ogaano dhibaatada isla markaana ka saarno fayraska kombiyuutarka sida ugu dhakhsaha badan. Inta lagu jiro qodobkan, Ross Barber, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guud ee Macaamilka, wuxuu kuu sheegi doonaa in fayraska kombuyuutarku uu waxyeelo weyn u geysan karo qalabkaaga
Viruses iyo Gooryaanka
Fayraska kombiyuutarku waa barnaamij gaar ah oo ku faafi kara kombuyuutarrada oo isku qarinaya nidaamkaaga. Waxay ku duuduubtaa faylasha waxayna wax u dhimeysaa xogta iyo sidoo kale dhammaan codsiyadaada. Sidoo kale, waxay u safri kartaa hal qalab ilaa mid kale oo aan aqoontaada lahayn
Qaababka casriga ah ee noocyada casriga ah waxaa loo isticmaalaa si ay ula socdaan isticmaalayaasha internetka..Mararka qaarkood, waxaad arki doontaa khadadka buluuga ah ee webka, iyo waqtiyo kale xawaaraha kumbuyuutarka ayaa hoos u dhacaya
Gooryaanka ayaa marka hore soo muuqday qarnigii 19aad waxaana lagu sii faafiyaa qalabka kombuyuutarka ee isku xiran Wi-Fi isku mid ah. Waxaa lagu soo bandhigaa qaabka farriimaha dhibcaha ee shaashaddaada. Fayraska ugu horreeya waxaa loo yaqaan Elk Cloner. Waxa la qoray sannadkii 1980-kii, waxayna saamaysay tiro badan oo kombuyuutarro ah iyada oo loo marayo foorno.
Trojans iyo zombies
Waa ammaan in la yiraahdo in fayruusyada iyo gooryaanka ayan ahayn dhibaato, laakiin Trojans iyo zombies ayaa qaatay qaab daran. Waxay u shaqeeyaan sidii hub culus oo khawano ah si ay u helaan qalabkaaga. Waxay ku qasbayaan shirkadaha iyo isticmaalayaasha software inay xidhaan nidaamkooda ama waydiiso inay bixiyaan madax furasho inta aysan nadiifin nidaamka.
Qaar badan oo ka mid ah joodariyeyaashu waxay xaday ereyada sirta ah, adeegayaasha iyo lambarrada credit card boqolaal kun oo qof. Waxay barnaamijyadooda ku rakibaan nidaamyadaada waxayna muujinayaan daaqadaha fiiqan ee daaqadaha, oo ku faafaya mishiinka gudahooda. Barnaamijyadan waxaa badanaa loo yaqaanaa fardaha fanka. Waxaa jira caddayn in fayruusyada iyo farsamada fardaha ee ganacsadaha fuulaya lacag badan ayagoo isticmaalaya qalabkaaga ku xiran internetka.
Spam iyo spamer
Waqtiga waqtiga, spammers iyo hackers ayaa bilaabay isticmaalka botnets si ay u diraan emails laga shakiyo si dad badan. Haddii aad hesho emailka noocaas ah, waa inaad ku sawirtaa kombuyuutarkaaga xagjirayaasha iyo fayrasyada oo xannibaya dhamaan email-ka emailka ee shaki ku jira. Dambiileyaashu waxay joogaan meel kasta waxayna mar kasta mashquul ku yihiin in ay isticmaalaan dadka isticmaala hal hab ama mid kale.
Phishing waa qaab kale oo fayruusyo ah oo inta badan ku dabaabaya dadka isticmaala iyada oo emails iyo fariimo warbaahineed oo warbaahinta bulshada ah. Qaar badan oo ka mid ah jilayaasha iyo spamiyayaashu waxay khayaameeyaan dadka isticmaala, inay xado lacagtooda oo ay waxyeeleeyaan qalabka kombiyuutarka.